AKHRISO:- Cabdiraxmaan Baadiyow: ” dhamaan Liiski Ergayda shirka way na soo gaareen - Nabad iyo Nolol
Guddoomiyaha Guddiga qaban qaabada Shirka dib u heshiisiinta Beelaha dega deegaannada Galmudug Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi (Baadiyoow) ayaa sheegay in Guddigooda ay diyaariyeen dhamaan waxyaabihii muhiimka u ahaa qabsoomida shirkaas.
Waxaa uu sheegay in dhinacyada,hoolka shirka, Agabka la isticmaalayo, iyo amniga intaba la diyaariyay,isla markaana kaliya ay harsan tahay in shirkaasi uu qabsoomo 17 Bishaan oo ku beegan Berri oo Sabti ah.
Hadalka Guddoomiyaha Guddiga qaban qaabada Shirka dib u heshiisiinta Beelaha dega deegaannada Galmudug Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi (Baadiyoow) ayaa kusoo aadaya xilli shalay mid ka mid ah Beelaha dega Galmudug ay dalbadeen in shirka dib loo dhigo ilaa inta uu ka dhamaanayo shir uga socdo degmada Hobyo ee Gobolka Mudug.
The post AKHRISO:- Cabdiraxmaan Baadiyow: ” dhamaan Liiski Ergayda shirka way na soo gaareen appeared first on Allgalgaduud.Com.
DEG DEG:Qaramada Midoobay,midowga Afrika iyo IGAD oo ka hadlay Doorashada Jubbaland